Date My Pet » Four Common Ukama Zvinetso
Last updated: Oct. 15 2020 | 3 Maminitsi verenga
Rudo yakadaro incredible chinhu! Ndicho chikonzero nei tinopedza hafu hwedu kuedza kuwana munhu. Asi kana tikaita kuti chete hafu yacho. Isu tinosungirwa vane matambudziko edu nenzira chero ukama asi pane nzira kuedza kugadzirisa izvi zvose zvakare zvinowanzovapo nyaya yatiri kutarisana. Rangarirai kuti panopera zuva uri pakudyidzana kana hapana matambudziko aya kurei kupfuura zvauinazvo pamwe ipapo iwe muine chimwe chinhu chinokosha. Rwisa kubatirira payo. Heino matambudziko mana zvakajairika kuti vanhu kusangana muukama uye sei kuti zvichida kuagadzirisa.
Kukurukurirana zvimwe ndiyo dambudziko rakajairika ukama pane. Pane nyaya dzakawanda kudaro vasingadi simuka muukama apo vanhu vaviri vari pasi peji chete kuenzaniswa kuti vanhu vasiri. Communication zvipingamupinyi kutitadzisa kudzivisa mamiriro ezvinhu kubva achikura uye akaoma kupfuura ivo chaizvo. Kana iwe nemumwe wako kuti zvipingamupinyi izvi zviri muukama hwenyu nenzira kutaura izvi ane rakashama, akatendeseka uye asiri kushora mwoyo. Zvakawanda pamoto inowedzerwa huni ezvinhu aya anobva asinganyatsonzwisisi pakati vaviri vanhu uye somugumisiro zvisarudzo iyoyo munhu asina kuteerera divi ravo nyaya. Edza kugara pasi uye kutaura, taura, taura.
Kuda Zvinhu Different
Kana iri zvinhu zviduku zvakadai kupi kubuda, apo kudya, nezvimwewo … kana nyaya yakakura zvakafanana kurarama kupi, kana kugara pamwe chete kana kuroora kana kuti vana kana kwete kuda zvinhu zvakasiyana idambudziko guru ukama. Zvino zvichaitika mune nzira imwe kana mumwe nokuti kunyange zvazvo isu tiri umwe kana tiri pamwe kuti munhu anokosha muupenyu hwedu tichiri vanhu dzedu pfungwa kwacho uye zvirongwa sei tinoona hwedu wekushanduka panze. Izvi kunokonzera kukweshera nokuti tiri kuona seanotora kure zvatinoda uye kana vakaramba Tinowanzova ramba pavo ichi. Zvaunofanira kuita muzokurukurazve asi unofanira kuremekedza zvavanoda, e.g. vanhu vakawanda vanoda kuroora kufunga kuti kuroorana mukuru uye zvikuru zvakakodzera pane kurarama pamwe chete apo mumwe munhu anoda kugara pamwe chete ivo havaoni zvinhu zvakafanana. Nemamwe mashoko, Munoda zvinhu zvakasiyana, kwete “nane” zvinhu uye kuti rinoda kuva kuti kuyeukwa kana zvikasadaro vanhu vanonzwa uri aendesa kana kunyange kudzvinyirira nzira vanofunga zvakarurama. Nzwisisa zvakare kiyi pano. Unoda ichi chero ukama. Just nechokwadi kuti zvakaenzana Pamiedzo kuitwa nomumwe nhengo dzako.
Mari ndiyo mudzi wezvakaipa zvose sezvo vachiti uye pakugarisana kunogona muchetura kuti unochengeta doro. Tiri kurarama munguva recessional nguva mabasa hazvisi kuwanikwa kazhinji. Vanhu vari kuparapatika uye inogona kuisa kwakakanganisa ukama hwako inova zvoga. Zvaunofanira kuita kurudziranai, kuratidza mumwe munotenda nemumwe uye kuti pamwe unogona kubuda mhiri nokuti pakupedzisira hamungandiurayi. Asi ino nharo munhu waunoda zvikuru munyika haasi kuenda kugadzirisa chinhu. Kana chinhu zvichaita chete kuti zvinhu miriyoni nguva kuipa.
doro Kuijairira & kusuruvara
Ava nyaya yakaoma munhu kuziva zvokuita kana vari kuona mumwe wavo pane vasisina tariro ebbs dzakadaro. Upenyu anogona zvakawanda munhu wose nenzira dzakasiyana uye vamwe vanhu kurarama zviri nani kupfuura vamwe. Zvaunofanira kuita ipapo pavo, kuvaratidza une kutenda mazviri kuti kudhonza kuburikidza uye regai kutaura mashoko kure kumusoro musoro wako izvo zvichaita kuti vave kunyanya pasi kupfuura ivo kare ndivo.
Pets Vanogona Sense Red Flags Panyaya Mr. Rudyi?